माओवादीद्धारा नियुक्त राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले राजीनामा | नेपाल इटाली डट कम
माओवादीद्धारा नियुक्त राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले राजीनामा
माओवादीद्धारा नियुक्त राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणनीधि शर्मा र तीन सदस्यले सोमबार साँझ राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिने अन्य सदस्यहरुमा राममणि पोखरेल, डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र डा. सुनीलबाबु पन्त हुन । माओवादी सरकारले माघ ६ गते डा. शर्मासहित अन्यलाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । अर्थशास्त्रमा विद्यावरिधी गरेका डा. शर्मा लामो समयसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र प्राध्यापन गरी अवकाश लिएका थिए । उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालकसमेत भैसकेका थिए । सदस्यमा माओवादी कोटामा नियुक्त तीन जनामध्ये दुई जना गोरखाका बासिन्दा हुन् । गोरखा घर भएका देवकोटा र पन्त माओवादी अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई निकट भएकाले आयोगमा नियुक्ती भएका हुन् । इन्जिनियरीङमा जापानबाट विद्यावारिधी लिएका यी युवाहरुको उमेर ३५ बर्षभन्दा कम थियो । पन्त आयोगमा आउनु अघि संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको शहरी वातावरणसम्बन्धी परियोजनामा कार्यरत थिए । देवकोटा भने विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा स्वतन्त्र परामर्शदाताको रुपमा क्रियाशील थिए । यी विद्धान युवाहरुमा योजना निर्माणसम्बन्धी काम गरेको कुनै अनुभव थिएन । राजीनामा दिएका अर्का सदस्य राममणी पोखरेलले भने युवा नै भएपनि अनुभवले खारिएका व्यक्ति थिए । उनी केही बर्ष अघिसम्म सरकारी कर अधिकृतको रुपमा कार्यरत थिए । अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापनसमेत गर्न भ्याएका थिए । सरकारी जागीर छाडेपछि उनी राजनीतिमा होमिएका थिए । उनीहरुले राजीनामा दिएपछि अब आयोगमा एमालेको तर्फबाट गएका प्रेम बहादुर कुवँर, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, फोरमको कोटामा नियुक्त रत्नेश्वरलाल कायस्थ र सद्भावनाको कोटामा रामदेव सिंह छन् । योजना आयोगमा ८ सदस्य थिए । यो समूहले ५ महिना यता आयोगमा खाशै काम गरेको थिएन । त्यहाँका कर्मचारीका अनुसार त्रीबषर्ीय योजना बनेर शुरु भैसकेकाले उनीहरुका खाशै केही पनि काम गर्नु परेको थिएन । कर्मचारीहरुका अनुसार उनीहरुले राष्ट्रिय विकास रणनीति पत्रको मस्यौदा गरेका थिए । यो मस्यौदाको मुख्य उद्धेश्य त्रिवषर्ीय योजना अवधीलाई दुई बर्ष थप्ने थियो । यो समूहले पाँच महिनामा गरेको अर्को काम नेपाल विकास मञ्चमा रणनीतिपत्र प्रस्तुत गर्ने तयारीमा थिए । आयोगमा सदस्य भएका व्यक्तिमध्ये कसैमा पनि भिजन नभएको, अनुभव नभएको भन्दै टेर्ने गरेका थिएनन । उनीहरु विहानै अफिस आउने र दिनभरी यत्तिकै बसेर साँझ र्फकने गरेका थिए । सरकारले उपाध्यक्षलाई मन्त्रीसरह र सदस्यलाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधा दिने गरेको थियो ।
कर्मचारीहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक कमजोर समूहको रुपमा यसलाई लिने गरेका छन् । यस अघिका डा. पिताम्बर शर्मा, शंकर शर्मा, पृथ्वीराज लिगल लगायतका व्यक्तित्वका अघि यी व्यक्तिहरुको कुनै तुलना नै हुन नसक्ने बताउदैं आएका थिए । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने भएकाले आयोगमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामासँगै राजिनामा दिने चलन छ । यसैवीच महान्यायधिवत्ताले पनि राजिनामा दिएको थाहा भएको छ ।
« प्रधानमन्त्री नेपालद्धारा सपथ ग्रहण
अब मेरो पालोः »